Wonke umuntu indaba tingacocwa ezinomsindo inkampani ukwanda degree of party. Kungaba isehlakalo funny kusukela ukuphila noma, Ngakolunye uhlangothi, yeka amahloni ukwabelana. Futhi ngezinye izikhathi izinto zenzeke ukuthi angeke sachaza, futhi engazi siqala ukuba nokholo emandleni angaphezu kwawemvelo.
Futhi makube kude wabo kwakungu izikhathi ngaphansi yimpumelelo futhi "dubula" kaningi. Ngu ongaziwa umthetho meanness ezilula nokuphila siyindlala, ngikhumbule ukukhungatheka ngaphezulu. Kodwa imemori uyasivikela futhi ngokuhlakanipha kuholela ngesikhathi esifanele, abavumi ekuhambeni ingqondo emhlabeni ongenabulungisa. Nazi izenzakalo ezimbalwa embula ukucabanga.
An icala ezithakazelisayo zokuphila
Yeka amagama, izinsuku, futhi ngisifihlele yesehlakalo. Ake sithi kwaba ekwindla edolobheni elithile elikhulu. Awu ndoda ephuzile - ngubani kungenzeki. Holiday, ajabule futhi ukutholakala kotshwala - sonke sibhekana. Njengenjwayelo, ephelezelwa umngane, owafunda esikhathini esingangehora esedlule, kodwa ilungele futhi afe ngenxa yako, iqhawe lethu wanquma ukuya search of uthando atholakale nightclub.
Ngakho handsome unyawo ukuhamba hhayi ngesimo futhi kwanqunywa ukuba catch a "ikhukhamba". Lapha podsobil umngane omusha, ekhomba emotweni ngamazwi athi "unhlangothi akwazi ukuxoxa." Abangane ixazululwe nge ubhiya esihlalweni esingemuva, ukungabi somshayeli ukuphoxeka. A umshayeli wemoto okuthile Kwakungelula. Local "amabhungu" izinombolo "intela" kuya ezincane emakethe kanye nomkhuba ushiye izimoto side by side.
Ogrebli ogrebli ngakho
Yeka ukumangala engaba nakho futhi ajabulela Ngokufana imiphongolo amabili '' abafowabo, 'u zokudakwa ukuzwa "umphathi, tibali letimbili." Le mpi yaba ngeyesikhashana. iqhawe lethu ngaphandle yokucasha isigqoko esikhotheni, futhi umngane wakhe omusha engcono adluliselwe isiqu. Uneminyaka ezihlekisayo, kodwa abantu niphuza aphonswe, lapho wayengasakwazi zingamtholi umngane womshado. Lokhu ezithakazelisayo uma ukuphila isishintshile yakhe yokuphila, ukupha ukunakekelwa uma ukhetha ukuthi itekisi enempilo isibindi. Njalo is sifundo ...
An icala ezithakazelisayo zokuphila esikoleni
Bangaki horror amafilimu ngalo yaqala ngala mazwi: "abafundi bebuthene kulo mkhankaso." Kodwa kukhona okuningi Isifaniso ofanelekile uhlobo, amahlaya munye nezimfihlakalo. Okokuqala, kwakukhona okuningi izixwayiso ongaziwa sengathi emandleni aphakeme kuqhathaniswa wokudela intsha ehlathini. Kuvikelwe isondo, ukhohliwe futhi amafoni difficile umdayisi iwayini vodka umnyango. Noma kunjalo, izingane beqhumuka nemvelo, ukuthatha itende wayifihla ngaphansi ijazi ezithandwayo zezingoma ibhodlela.
Ngobusuku bokuqala kwaba ehloniphekile. Youth basked komlilo, nokuxoxa izindaba scary, futhi ngasese ubalekele ehlathini ungiphuzise lemimoya, ukuze abadala musa prosekli. Morning kancane empunga Hangover, kodwa imisebenzi zokuzithokozisa kufanele sigcwaliswe. Kube uyafika isikebhe zenjoloba. Ezindala, ezigugile Umkhulu ucezu ipuleti ngisho ogwini akusho ezinokwethenjelwa.
Kodwa akukho nokukodwa ngaphezulu umfana nesibindi nge Hangover, nenhlanzi kuphela ekhanda sore - kuba, ngokuvamile, isiko. Futhi lapha onentshisekelo uma ukuphila, esasingaba ephelile ukuhluleka: elidala tarp edabukile, kanti abafana zaqala ukucwila phakathi elikhulu echibini. Futhi sisole uthisha ekilasini ehlathini, uma omunye ababezokwakha abadobi angibonakaliswa yinkakha yezemidlalo nokubhukuda. I wadonsa omunye. Ngaphandle izicathulo, ibhulukwe ngomakhalekhukhwini nama-iPod, kodwa wangikhiphela. A obuyimfihlo wukuthi kusihlwa odlule kwadingeka ethile impumelelo indaba amadoda cwilisa abahlala ichibi. Ungakwenza kanjani ungacabangi esizeni ukushukuma sabafileyo?
umlutha abakholelwa ezeni
Ngiye ngacabanga of ngandlela-thile omele kwezimali zomphakathi ukuthenga phansi ukucindezeleka. Nasshibal phezu ruble esiteshini wayishaya yazula. Waqale ezadlula a idunyiswe amaphoyisa. Khona-ke wahlangana amaphoyisa imoto nenombolo amnyama "N 666 ET". Futhi phezu ikati, ongcolisayo mangy black cat hit ukuqiniseka abakholelwa ezeni freak.
Futhi wayefuna ukuba ngibuyele emuva ngingahambi, ukumkhafulela futhi ukuba yisizalwane agcwele okufanayo. Kodwa imilenze ngokwabo alethwe kuleli kheli, futhi singasho ukuthi umuntu kwakungelona iphutha. Konke izicathulo Day - zingabantu okufanele asolwe ngenkinga yakhe. Kodwa thina digress. Njengoba bamangale njengamalungu azinikele "Shirikov" lapho umnyango ezithandwayo zezingoma wavula indoda isifihlwa. izandla Namandla jerked zamhudulela ku efulethini futhi aphonswe emdulini, okuyinto vele ezazimi kweshumi ukwehluleka efanayo. Okulandelayo abenguMesiya bullpen ezinsukwini ezimbalwa bese elungisiwe black iso. Lokhu esidabukisayo futhi funny ngesikhathi esifanayo endabeni yokuphila wamshaya umlutha. Futhi esikhundleni yokudlala endleleni kuze kube seqophelweni, wayeseqala ukumlalela kakhudlwana izimpawu kwaphezulu.
Ukuziphatha akuyona - akekho unesandla yokuthi abantu isiboshwa yezidakamizwa, futhi azikho izimpawu ezinjalo, ozokusiza ukuyeka noma ukuxwayisa ukuthi eduze igebe. Kungaba kuphela kube yize ukulwa bese ulinda kuphangwa yabo.
Iphuzu liwukuthi ukuthi kumelwe siphile
Konke iza nakho. Ngeke ukwazi ukutshela abangani bakho i icala ezithakazelisayo zokuphila, uma izwe kukhawulwe ekhaya nasemsebenzini. Ukuhlwanyela efulethini kanye nokubhekana kuphela isitshalo iraba, umuntu phuca yena ups lucky, ukudunyazwa ebabayo ezamehlela yingozi. Nietzsche wathi ukuba khona kungenziwa ngokuthi eliphelele lapho izibazi akuyona zero. Akunandaba, plus noma lokususa, usizi zenzeka izinsuku noma injabulo - siphila lapho sizizwa.
State Museum wezokuVikela eMoscow. Moscow Defense Museum: izithombe kanye nokubuyekeza
Kungani Anna Karenina Ufaka yena ngaphansi isitimela? Isithombe sika-Ana Karenina. lN UTolstoy sika "Anna Karenina"